Idiom kunye neZibonelelo zoNcedo zabafundi be-ESL
Iilwimi zesiNgesi kunye neentetho
Izixhobo zesiNgesi njengeLwimi lwesiBili Abafundi
Ngokukhawuleza kamva bonke abafundi besiNgesi bafunda iilwimi kuba isiNgesi sisebenzisa amanqaku amaninzi kangangokuba akunakwenzeka ukufunda isiNgesi ngaphandle kokufunda ezimbalwa, kodwa le ntetho yeentetho kunye nee-colloquialisms zinokuba nzima kubafundi besiNgesi njengoLwimi lweLwimi lwesiBili ukuba baqonde ngokukhawuleza. , ngakumbi kuba baxhomekeke kwiimveli zenkcubeko kumazwe athetha isiNgesi ukubonelela intsingiselo yokusetyenziswa kwazo.
Kwimeko nayiphi na into, abafundi be-ESL bafanele basebenzise ukusetyenziswa kweenkcazo zomxholo ukuzama ukuqonda oko umntu angathetha xa bathi "Ndandula ndabulala iintaka ezimbini ngelitye elinye ngokubhengeza le vidiyo yabini bobabini kwindawo yesehlakalo," kuthetha ukufezekisa iinjongo ezimbini ngomzamo omnye.
Ngesi sizathu, amabali afaka inani lamagama-amaxesha amaninzi eendaba kunye nezobhaliweyo kwisitayela (esithethiweyo) isimboli - ezinye zezibonelelo ezifanelekileyo kakhulu zootitshala nabafundi be-ESL efanayo.
Iimpawu zeenkcukacha kunye neenkcukacha eziqinileyo
Izihlandlo ezilula ukuguqulela isiNgesi-to-Spanish zesigqibo ngeke senze ingqiqo ngokukhawuleza ngenxa yobuninzi bamazwi kunye nesiNgesi kulwimi kufuneka sichaze ihlabathi lethu lemihla ngemihla, elithetha ukuba ezinye zeenjongo zangempela zamagama zingahle zilahleke ekuguquleleni .
Ngakolunye uhlangothi, ezinye izinto azinakucatshulwa kwimiba yenkcubeko - ingakumbi ngokuqwalasela amaninzi amanqaku aseMelika aseNgilandi ayimvelaphi kwaye ayifumaneki, oko kuthetha intsingiselo yezihlandlo zesiNgesi ezithethayo ngaphandle kokukwazi ukuba kutheni okanye zivela phi.
Thatha umzekelo umxholo othi "Ndivakalelwa phantsi kwemozulu," eguqulela ngesiSpanish ukuba "Yenza i-poco en el tiempo." Ngelixa amagama angenangqiqo ngokwabo ngesiSpanish, ukuba phantsi kwezulu kuya kubandakanya ukuxhamla eSpeyin, kodwa kuthetha ukugula eMelika. Ukuba, nangona kunjalo, isivakalisi esilandelayo sasinjengathi "Ndiba nomkhuhlane kwaye ndingenako ukuphuma ebhedeni yonke imini," umfundi uyaqonda ukuba phantsi kwemozulu kuthetha ukungaziva kakuhle.
Ukufumana imizekelo engakumbi kwimimiselo, khangela " Iimpawu zokuphumelela zikaJohane ," " Umlingane ongathandekiyo ," kunye " noMhlobo wam Ophumelelayo " - zonke zizaliswe ziimpawu ezicacileyo kakuhle kwiimeko ezilula ukuziqonda.
Idioms kunye neentetho ngegama elilodwa kunye namaVenzi
Kukho izibizo kunye nezenzi ezazisetyenziswa kwinani lamagama kunye namazwi; ezi zintetho kuthiwa zidibene kunye negama elithile elithi "fakela" kwi "fake imfoloko kuyo" okanye "bonke" kuwo "wonke umsebenzi womsebenzi." Ezi zibizo eziqhelekileyo zisetyenziswe ngokuphindaphindiweyo ngesiNgesi, kwaye kwiimpawu zisetyenziselwa ukumela ukufana okwabelwana phakathi kwezifundo ezininzi. Njengazo zonke, ziza, zibeke, zenze, zisebenze, zonke, kwaye [njengeqhekeza] njengamazwi asetyenziswa ngokuqhelekileyo adibeneyo, kodwa uluhlu olupheleleyo lukhulu kakhulu.
Ngokufanayo, izenzi zenziwayo zisoloko zisetyenziswe kwiimpawu ze-idiomatic apho isenzi sihamba nayo i-universality to action-efana nokuhamba, ukuqhuba okanye okukhoyo. Isenzi esona siqhelekileyo esisetyenzisiweyo kwiimpawu zakwaMerika ziyizenzi zesenzi "ukuba."
Khangela le mibuzo emibili (Imibuzo engama-1 ye-Idiomatic Phrases Quiz 1 kunye ne-Common Idiomatic Phrases Quiz 2) ukuze ubone ukuba ngaba uyayifumene nale miyalezo eqhelekileyo.
Ukudala i-Newscast ESL Isifundo
Funda Ukuqhawula Okulula "I-Tomber" (Ukuwa)
Yintoni iSpanishi 'yoMntwana okhuselekileyo'?
Indlela Yokubhala Iingxowa Zesixhenxe Ezibulalayo kwiJapan yaseJapan
Funda iJapan Word Shitsurei
Indlela yokusebenzisa isichazi sesiFrentshi 'iTant Pis'
Imithetho kaMorgan yintoni?
Indlela yokudlala iPing-Pong
Quotes Movie Quotes
I-Purple Dead Nettle
Calidad vs Cualidad
IsiCwangciso esisodwa sokufundisa nokuFunda malunga ne-Architecture
I-Top 20 Country Iingoma Zothando Ngama-Decade
Iiklasi zoMculo zasehlobo
Ngaba iAsh ngoLwesithathu nguNgcwele woMthwalo?
I-20 Indie Record Labels eziphezulu
Indlela yokuthi 'Akukho,' 'Akukho mntu,' 'Akukho nto' ngesiFrentshi
Ukusebenzisa i-Calculus Ukubala i-Cross-Price Elasticity of Demand
I-Winsor ne-Newton Artist's Acrylic Sula iGesso
Indlela eya kwiNguqulelo yaseMerika
Ukwakheka emva (amagama)